Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo Shaqaalaha Dalxiiska ku booriyay inay is -tallaalaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo Shaqaalaha Dalxiiska ku booriyay inay is -tallaalaan
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Mudane. Edmund Bartlett wuxuu soo saaray codsi aad u xiiso badan shaqaalaha dalxiiska ee aan la tallaalin, oo ay ku jiraan kuwa ku jira waaxaha hoose ee la xiriira maraakiibta maraakiibta, si loo tallaalo.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa sheegay in shaqaalaha safka hore ay door muhiim ah ka ciyaaraan soo celinta dhaqaalaha dalka iyo ladnaanta.
Kahor soo noqoshada la filayo ee warshadaha dalxiiska, Wasiirku wuxuu rabaa in dadku ay tallaalaan hadda.
Khadadka maraakiibta ayaa aad u doonaya inay dib u bilaabaan safaradii ay ku tagi jireen Jamaica laakiin waa inay u hoggaansamaan tilmaamaha la tilmaamay.
“Shaqaalaha dalxiisku waa inay had iyo jeer xusuusnaadaan inay yihiin shaqaale safka hore qiimo leh oo kaalin muhiim ah ka ciyaaraya soo celinta dhaqaalaha qaranka iyo xaaladooda fayoobaanta. Sidaa darteed, waa inay kaalintooda ka qaataan sidii looga gudbi lahaa dib-u-dhaca hadda jira ee uu abuuray masiibada COVID-19 iyagoo qaadanaya tallaalka, ”ayuu yiri Mr. Bartlett.
Racfaankiisu wuxuu ka soo horjeedaa asalka dadaallada lagu xoojinayo heerarka tallaalka ee gudaha iyo rajada sare ee soo noqoshada maraakiibta maraakiibta ee dekedaha Jamaica toddobaadyo gudahood.
“Maraakiibta dalxiisku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah badeecadeena dalxiiska iyo darawal muhiim ah marka la eego imaatinka booqdaha iyo kharashaadka. Kumanaan reer Jamaica ah waxay ku tiirsan yihiin warshadaha maraakiibta maraakiibta, waxaanan rajeyneynaa soo laabashadeeda, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Wuxuu yiri in kasta oo dhaqdhaqaaqyada maraakiibta ee dekadaha Jamaica ay ahaayeen kuwo aan fadhiyin sannadkii iyo badhkii la soo dhaafay, “waxaan sii wadnaa inaan maal -gashanno horumarinta dalxiiska dalxiiska, oo muhiim u ah soo -kabashada waaxda dalxiiska. JAMVAC (Jamaica vacations Ltd.) ayaa waday dadaalkaan maadaama aan ku guda jirno qalalaasahaan si aan uga faa'iideysanno hab wadashaqeyn oo cusub oo qiimo weyn u keeni doona rakaabka, khadadka safarka iyo Jamaica Destination. ”